दाउदको लगानी काठमाडौंमा ! नेता समेत पार्टनरसिप रहेको भारतीय संचारमाध्यमको दाबी – Janata Times
दाउदको लगानी काठमाडौंमा ! नेता समेत पार्टनरसिप रहेको भारतीय संचारमाध्यमको दाबी
अन्डरवर्ल्ड डन दाउद इब्राहिमको ठुलो लगानी काठमाडौंमा रहेको दाबी भारतीय सञ्चार माध्यमहरुले गरेका छन् । कुनै समय दाउदको ग्याङ्गका सदस्य समेत रहेका एजाज युसुफ लकडा पटनाबाट पक्राउ परेपछि उनिहरुले सो दावी गरेका हुन् ।
मुम्बई प्रहरीको सोधपुछमा उनले यस्तो बताएको समाचारमा उल्लेख गरेका छन् । भारतीय अनलाईन जागरणमा प्रकाशन भएको एक समाचारमा जनाइए अनुसार नेपालमा पाकिस्तानी दूतावासका प्रमुख अधिकारीको माध्यमबाट दाउदले आफ्नो धन्दा चलाइरहेको दावी गरेको छ ।
त्यस्तै भारतीय अनलाइन प्रभाव खबरका अनुसार काठमाडौंमा दाउदको कम्पनीले करोडौंको लगानी गरेको र निकै ठूलो कारोबार सञ्चालन गरेको छ । सबैभन्दा धेरै लगानी इन्फास्ट्रक्चरको क्षेत्रमा गरिएको समाचारमा दाबी गरिएको छ । तर समाचारमा कम्पनीको नामबारे भने उल्लेख गरिएको छैन ।
कयौं कन्स्ट्रक्सन र अन्य कम्पनीमा पनि दाउदले लगानी गरेको र यसमा नेपालका कयौं नेताहरुको पनि पार्टनरशिप रहेको दाबी समाचारमा गरिएको छ । तर कुन कुन नेताको पार्टनरशिप छ भन्नेबारे भने कुरा कतैपनि उल्लेख गरिएको छैन ।
दाउदको कम्पनीले सन् २००८–२००९बाट नै काठमाडौंमा लगानी गर्न शुरु गरेको र उक्त कारोबार मुख्य रुपमा लकडाले नै हेर्ने गरेको उनले भारतीय प्रहरीलाई दिएको वयानमा उल्लेख गरिएको समाचारमा जनाइएको छ । क्यानडापछि दाउदले आफ्नो दोस्रो महत्वपूर्ण स्थानमा नेपाललाई नै बनाएको समाचारमा दाबी गरिएको छ ।
काठमाडौंको बासबारीमा दाउदको एक आलीशान होटल रहेको र उनी काठमाडौं आउजाउ गरिरहने दाबी समाचारमा गरिएको छ ।
Related tags : दाउदको लगानी काठमाडौंमा ! नेता समेत पार्टनरसिप रहेको भारतीय संचारमाध्यमको दाबी
काठमाडौंको यातायातमा भियना मोडल अपनाइदै, लागु भए यस्तो सुलभ हुनेछ यातायात
गायिका आस्थाले प्रहरी महिलाको मुखबाट हालेको लठ्ठी …बाट निकालिदिन्छु भनेपछि
सीमामा खटिएर उपत्यका आएका सशस्त्र प्रहरीका ३६ जना कोरोना संक्रमण
ट्रम्पविरुद्ध महाभियोग : रिपब्लिकनको बहुमत रहेको सिनेटमा सुनुवाइ सुरु
७४ हजार घुसहित समातीय घरेलु बिकास समिति दोलखाका खरिदार